ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခနှင့် အင်တာဗျူး - Chin World
Home News ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA) ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခနှင့် အင်တာဗျူး
” ဗမာစစ်တပ်က ပလက်ဝမြို့နယ်ကို အခြေခံပြီးတော့ တိုက်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့လည်း ခုခံတိုက်ရမှာပေါ့”
မေး။ ။ AA ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ပလက်ဝမြို့ပေါ်နဲ့ ပိုပိုနီးလာနေတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ စစ်ရေးလိုအပ်ချက် အပေါ်အခြေခံ တာပေါ့။
မေး။ ။ ကင်းတလင်းကျေးရွာသားတွေကို ဖမ်းစီးထားတာကော ဘယ်တော့ပြန်လွှတ်ပေးမှာလဲ?
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ဖမ်းစီးထားတဲ့ရွာသား တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဗျ၊ အခုသတင်းထွက်နေတဲ့ ၅၂ယောက် ပျောက်နေတယ်ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့မသိဘူး၊ ကျနော်တို့ဆီမှာရှိတာက ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းလောက်က ရွာလေးရွာကနေ တပ်မတော်ဘက်က အမြောက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ဆိုပြီး လူဦးရေ ၁၂၄ယောက်က ရွာမှာမနေရဲလို့ ကျနော်တို့တပ်ဘက်က ကူပြီးခေါ်ထားတာရှိတယ်၊ သူတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မှာ နေရာချထားပေးတယ်။အခုလောလောဆယ် သူတို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြပါတယ်။
မေး။ ။ AA အနေနဲ့ အခုလက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာ လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး (CNF) က ဘာပြောတာရှိလဲ။ ပြောဆိုညှိနှိုင်းတာတွေရှိလား?
ဖြေ။ ။ ကျနော်သိသလောက်ပြောရရင်တော့ ခုချိန်ထိ အဲလိုမျိုးမရှိသေးဘူးဗျ၊ ဒီကိစ္စတွေကလည်း ဌာနချုပ်နဲ့ ပိုဆိုင်တာဆိုတော့ ကျနော်လည်းမသိဘူးဗျ။
မေး ။ ။ AAရဲ့ အောက်ခြေတပ်သားတွေက ပလက်ဝဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုတာမျိုးရှိတယ်လို့ ရွာသားတွေဆီက သိရတာတွေရှိတယ်။ AAရဲ့ သဘောထားက ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါတွေကတော့ သွားပုတ်လေလွင့်ပြောနေတာတွေဘဲဖြစ်မယ်၊ ကျနော်တို့မှာက အဲလိုမျိုးညွှန်ကြားချက် ဘာမှမရှိဘူး၊ ကျနော်တို့မှာက စစ်ရေးလိုအပ်ချက်အရ လှုပ်ရှားတာတွေဘဲရှိတယ်၊ အဲဒီကိစ္စတွေ ညွှန်ကြားတာတွေ ဘာမှမရှိဘူးဗျ။
မေး ။ ။ စစ်ပွဲကြောင့် အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေလည်း တာဝန်ကျရာ မသွားရဲတော့ဘူး၊ စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်း များလာတယ် အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘာပြောချင်လဲဗျ?
ဖြေ။ ။ တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ စစ်ရှောင်တွေကတော့ရှိတယ်၊ ကျနော်တို့ ရခိုင်ပြည်ထဲမှာလည်း စစ်ရှောင်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်၊ အခုဆိုရာဂဏန်းလောက်တောင်ရှိနေလောက်တယ်၊ စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ စစ်ရှောင်စခန်းရှိတာတော့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။
မေး။ ။ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းမှာ AA အနေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဘယ်တော့အဆုံးသတ်နိုင်မလဲ။
ဖြေ။ ။ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ကျနော်တို့ လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာက စစ်ရေးအခြေအနေအရကြောင့်ပေါ့၊ တစ်ကယ်လို့ ပလက်ဝမြို့နယ်မှာ ဗမာစစ်တပ်က ဆုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့လည်း လှုပ်ရှားချင်မှလှုပ်ရှားမှာပေါ့၊ ဗမာစစ်တပ်က ပလက်ဝမြို့နယ်ကို အခြေခံပြီးတော့ တိုက်နေတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့လည်း ခုခံတိုက်ရမှာပေါ့လေ။
Previous post ပလက်ဝမှ တောင်ပြိုသို့ သွားသည့်နေရာတွင် စက်လှေနှစ်စင်း အဖမ်းခံရမှုမှာ တိုက်ပွဲဇုံထဲတွင်ရှိနေသဖြင့် ရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့​ကြောင်း AA ​ပြော
Next post ပြည်နယ်အတွင်း ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်း အတက်နိုင်ဆုံး ညီမျှမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်မည်ဟု ကတိပြုကြောင်း ဦးစိုးထက်မှဆို
လူနာ​သေဆုံးမူနှင့်​ပတ်​သက်​ပြီးထန်တလန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံအုပ်ကို ပြည်နယ်အဆင့်မှ ခေါ်ယူသတိပေး
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်ရှိ ခေါ်နူးစုမ်အမျိုးသားဥယျာဉ်တွင် တောင်ဇလပ်ပင်(၁၀၀)နှင့် ချယ်ရီပင်(၇၀၀) စိုက်ပျိုး